Kedu ihe pụrụ iche gbasara Social Media? | Martech Zone
Urua, M kwuru na otu n'ime ihe mere mgbasa ozi mgbasa ozi na-akụ afọ n'ala ọtụtụ ndị na-ere ahịa bụ n'ihi na anyị amatabeghị algorithm. M ka na-echeghị na e nwere anwansi algọridim… ma izu a, M nwere ike izo aka na otu n'ime ndị pụrụ iche àgwà nke na-elekọta mmadụ media. Ọ bụ vulnerability.
Ngalaba na-esote bụ nke onwe… yabụ ọ bụrụ na ọ dị gị ka ọ dị ntakịrị, wee gbagaa n'akụkụ na-eso ya!
Banyere ọnwụ nke nna m ochie
Onwa a abiala onwa siri ike. Izu ole na ole gara aga, liri m ezigbo enyi si ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Na ụnyaahụ, anyị liri nna ochie ezinụlọ na nwoke a kpọrọ m aha nna nna m, Douglas Morley. Amaara m na ọtụtụ folks nwere ụfọdụ ịrịba nne na nna ochie… ma nna nna m bụ nnọọ a pụrụ iche onye. O debanyere aha na Canadian Royal Army ma jee ozi na Agha Worldwa nke Abụọ. Ọ bụ ọkachamara n'ihe gbawara agbawa, nyere ya ọrụ ma lara ezumike nká n'ọkwa Captain. N'oge mgbe ọ na-ewughị ewu, ọ họọrọ ịlụ nwanyị nwanyị nwanyị mara mma nke nwanyị - nne nne m, Sylvia.
Nne nne m bụ nwanyị pụrụ iche, dịkwa ike. Ruo mgbe ọ nwụrụ na 2003, ọ bụ nne na nna dị jụụ nke ezinụlọ. Mgbe nna m ochie jere ozi na Europe dum, nne nne m rụzuru ụlọ ọrụ na-aga nke ọma - nke a na-anụbeghị n'oge ahụ. Nna m ochie fere nne nne m…. ekwughị m nke ahụ n'ụzọ dị mfe. Mgbe nna nna m nwụnahụrụ ya mgbe ọ lụsịrị ọmarịcha alụmdi na nwunye ruo afọ 58, o dere nke ahụ a gbachiri nku abụọ nyeere ya aka ifepụsị ndụ ya niile. Ejighi m n’aka na a hụla m nwoke nke mere nke a n’enweghi nkwenye, n’achọghị ọdịmma onwe ya nanị nye nwunye ya.
Ka ọ na - arịa ọrịa, nna nna m jiri ohere ọ bụla chere nne nne m ọsọ. Ọ dịghị mgbe ọ lara azụ - ọbụnadị na nsogbu ya na nsogbu ahụike ya. Mgbe ihe siri ike, o tinyere ya n'ụlọ nlekọta. Afterbọchị ole na ole gachara, ọ masịghị etu esi elekọta ya ma dozie ụlọ n’ime ụlọ. Ọ nọ n’akụkụ ihe ndina ya ehihie na abalị. O mere ka ndi folks bia mee ntu ya na ntutu ya. Ọ dịghị ihe dị ịtụnanya.
N’ebe olili ozu ahụ, ahụrụ m ọtụtụ ndị nna nna m metụrụ aka. Dị ka onye ọrụ ubi na-anaghị asụ Bekee nke lekọtara ụlọ nna nna m. Amaghị m na nna m ochie ji ego achụ ego nwoke ahụ. Ezutere m onye na-elekọta ya, nwanyị Africa America nke bebere akwa igbe ozu ya ma gwa m na ọ nwetụbeghị onye mmadụ hụrụ ya n'anya karịa. M zutere Rabbi ya, onye ọ gara n'ihu na-amụ mgbe nne nne m gafere (n'agbanyeghị na ọ bụ onye Protestant). E nwere ndị si n’akụkụ ụwa niile nke bịara ma ọ bụ zipụ nkasi obi ha. Ndi Masons biara wee nye ha emume ha daalu nu nwannem. Otu onye otu ndị otu ndị agha Amerịka bịara kwanyere onye agha ọzọ tufuru n’ọgbọ kacha ukwuu.
E liri nna nna m na uwe ejiji ya… na onye na-egwu egwu mgbe niile, a na-eli ya na mgbịrịgba ọnụ ụzọ ọ rịọrọ maka ihe omume ọ tetara (ọ gwara nwa nwa ya na ọ ga-agbanye ya ka ọ pụọ mgbe m Mama gara ebe a na-eli ozu!). Mgbe bagpiper kpọchara Chineke Chekwaa Nwanyị Nwanyị ahụ na Ikpeazụ PostNdị bagpipes mụụrụ ihe ịrịba nsụgharị nke Hava Nagila. Anyi nile ji obi uto ma chịa ochi, anyi nile kwara akwa anya mmiri… ma anyi nile achi ochi wee si ezigbo nwoke.
Amaghị m na ọ dị onye nyerela ha ụtụ ịtụnanya na ịtụnanya. Ọ dị mkpa iburu n'obi na mama m, onye ji achọghị ọdịmma onwe ya nanị lekọta ya ehihie na abalị n'ime afọ ole na ole gara aga, mere atụmatụ ihe ngosi a dị ịtụnanya.
Laghachi na Social Media
Mgbe m dere na nna nna m gafere na Facebook, ọtụtụ narị mmadụ wepụtara oge iji kwuo okwu. Enwetara m iju mmiri nke ozi ịntanetị, ozi ederede, tweets, oku ekwentị na ederede onwe onye. Adịghị m esonye kemgbe ahụ… ezinụlọ bụ isi ugbu a ma na-akwado mama m (otu nwa) bụ isi nke uche m. Ndị ahịa m, ndị enyi m, na ndị na-eso ụzọ m na-akwado m nkeji oge site na ịbụ onye na-elekọta mmadụ. Okwu adighi egosiputa otu m si si n’ebe unu no puo. Daalụ.
Anaghị m ede ihe ọ bụla nke a maka mmetụta ọmịiko ma ọ bụ ọmịiko just Naanị m chọrọ ịgbaso mgbe m nwere ike ịkọrọ gị ndị isi ihe mere m jiri nọrọ jụụ. Ekwenyere m na ndụ nna nna m chọrọ ịkekọrịta ma mee ememe, ọ bụghị iru uju.
Nakwa, ọ mere ka m ghọta ihe nwere ike bụrụ ihe pụrụ iche gbasara soshal midia. M na-enwekarị oge ike okwu njikọ akaỌ na-amalite ụda premedised na arụpụtara. Mgbanwe abụghị otu dị ka njikọ aka. Njikọ aka na-eme n'etiti mmadụ abụọ dị njikere… nsogbu na-eme mgbe otu akụkụ meghere onwe ha. Ike ngwangwa nwekwara ike imeghe gị ịkwa emo, ịkwa emo na nkatọ nwere ike. Mana nke ka mkpa bụ na ọ ga-eme ka gị na ndị na-ege gị ntị jikọọ n'ogo nke enweghị ụzọ nkwukọrịta ọzọ. Enweghị ike ịdebanye ya n'ahịa ọ bụla.
Nke ahụ bụ ihe pụrụ iche gbasara mgbasa ozi.
Ekele m n’obi ezigbo enyi. Nna nna gi dikwa ka nwoke nke juru eju. Ọ bụrụ na m nwere ihe ùgwù ịhụ ya. Were nwere ihe ọma ịmata nne na nna gị ochie. M nwụrụ mgbe m dị obere icheta. N'ihi ya, na-echeta ihe ndị ahụ.
Daalụ BB! Ọ bụ ezigbo nwoke na onye mba Canada!
Anọ m na ahia maka afọ 30. Mgbasa mgbasa ozi na-arụ ọrụ naanị mgbe enwere njikọ aka na ezigbo nkwurịta okwu. Achọpụtara m na ọ na-atọ ọchị na a na-ewerekarị ya dị ka mgbanaka anwansi. Enweghị njikọ aka na ezigbo nkwukọrịta ọ bụ mmega na ihe efu. Ọnụ ọgụgụ nke ndị na-eso ụzọ bụ nke abụọ maka ogo nke njikọ ahụ.